Ukwesaba iWuhan Coronavirus kudlulela ezimakethe zezezimali | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | | Crisis, Izaziso
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, akekho owaziyo ukuthi bekuyini, futhi njengamanje iWuhan Coronavirus iba esinye sezihloko ezisemqoka zosuku. Ukubukeka kwayo okungajwayelekile futhi okungazelelwe kubeke iziphathimandla zaseChina nomhlaba wonke esimweni. Konke lokhu kwesaba kuthinte izimakethe zamasheya emhlabeni jikelele, kuvela izindaba ngayinye. Ingabe I-Coronavirus Ngempela Ingubhubhane Lokwesaba? Kungani amasheya ehlushwa ukwehla kwezinsuku zakamuva? Ngabe ukwehla kweminikelo kuhlobene ngempela nalesi sifo esisha?
Sonke silinde ukuvela kobhubhane, futhi yilokho ukusabalala kwalo kuyashesha kakhulu. Yize bekungaziwa kangako ngemvelo yayo, iziphathimandla seziyosebenza ukunqanda ukuqhubeka kwayo. Ngakho-ke, izimpawu zokuqala seziqala ukubonakala ukuqonda ukuthi isebenza kanjani, futhi ngaleyo ndlela ikwazi ukuthatha izinyathelo zokulawula ezingcono. Ukwesaba, kepha, kuza ngalesi sikhathi ezimeni ezizungeze iCoronavirus, futhi ngaphezu kwakho konke ukusuka endaweni lapho kwenzeke khona kanye nesikhathi kufana nonyaka omusha wamaShayina WamaShayina. Kungumzuzwana nje lapho kunezigidi eziningi zokufuduka ezweni lonke nakwamanye amazwe. Ubhadane olunemvelo olwenza luhluke ngalesi sikhathi.
1 Iyini iWuhan Coronavirus?
1.1 Ukuziphendukela kwemvelo nokwandiswa kwesifo
2 Yimiphi imikhakha elinyazwa kakhulu?
3 Yini ongayilindela kumthelela weCoronavirus ezimakethe?
Iyini iWuhan Coronavirus?
I-Wuhan Coronavirus ingeyomndeni wakwaCoronavirus, iqembu elikhulu lamagciwane e-RNA anemvilophu ejwayelekile yegciwane. Kuze kube manje kunezinhlobo ezingama-39 ezehlukene zeCoronavirus, ezinhlobonhlobo zezifo ngokuya ngokuthi ikuphi. Abanye abanezimpawu ezinzima njengamakhaza avamile, abanye abafana ne-bronchitis, i-bronchiolitis, i-pneumonia, i-Middle East syndrome yokuphefumula (eyaziwa njenge-MERS-CoV) noma i-acute acute respiratory syndrome (SARS-CoV).
I-Wuhan Coronavirus (2019-nCoV), okusikhumbuza kakhulu ngomqedazwe wakwaSARS wango 2002-2003. U-Arnau Fontanet, oyinhloko yomnyango wezifo ezithathelana ngezifo ePasteur Institute eParis, uthe igciwane elisha i-2019-nCoV lingama-80% ngokwezakhi zofuzo elingana ne-SARS. Lokhu kuqhathanisa kuholele esiphethweni sokuthi mhlawumbe kungaba ukushintsha kwezinguquko kwaSARS.
Ngaphezu kwalokho, izolo bekushiwo ukuthi kunesici sokuthi kuyathathelana ngisho nangaphambi kokuba izimpawu ziqale ukubonakala. Kodwa-ke, kusanda kunqatshwa, okunikeza i-aura yokungazi okuthile nokutadisha okuqhubekayo ukuqonda ukusebenza kwalesi sifo.
Ukuziphendukela kwemvelo nokwandiswa kwesifo
Kunokukhathazeka ukuthi lingasabalala emhlabeni wonke, ukuthi iChina kungenzeka ukuthi ayinalo leli gciwane futhi lidale ubhadane. Ukuqonda ubukhulu bendaba, vele ubheke idatha etholakala usuku nosuku. Phakathi kokufanele kakhulu, kufanele kugqanyiswe okulandelayo:
Inani lamacala aqinisekisiwe lisuke ku-220 laya ku-2.850 ngeviki. Ukuphindaphindwa ngo-13.Lokhu bekuyizolo, ngoMsombuluko, ngoJanawari 27, njengamanje namuhla, umhla wama-28, ngesikhathi kubhalwa le migqa, sekuvele kunabangu-4.500 XNUMX abathelelekile.
Inani labashonile ababhalisiwe lisuke ku-3 laya ku-81 ngesonto. Ukuphindaphindeka izikhathi ezingaphezu kwezingama-25. Lokhu ngoJanuwari 27, namuhla ngoLwesibili 28, kumenyezelwe isibalo sabantu abangu-106 abashonile, okungaphezu kwama-25 kunayizolo. Isibalo sokugcina sabantu abaphulukisiwe besingama-60.
I-WHO izolo ilungise umbiko lapho iphakamise khona ubungozi bamazwe omhlaba ukusuka "kokulinganisela" kuya "phezulu". Ezingeni likazwelonke laseChina, isilinganiso sobungozi "siphezulu kakhulu".
Kunamacala abhaliwe angama-44 ngaphandle kweChina labantu abathole lesi sifo. Phakathi kwamazwe ahlukene sithola iSingapore, iFrance, iJalimane, i-Australia, iThailand, iMalaysia, iSouth Korea, iJapan, i-United States, iVietnam, iNepal neCanada.
Umongameli wase-USA, UDonald Trump ubhale kuTwitter izolo ukuthi kunikezwa usizo eChina ukuqukethe igciwane.
Yimiphi imikhakha elinyazwa kakhulu?
Ngokunikezwa kwezinyathelo zokunqanda ubhadane olwamukelwa ngohulumeni, izinkampani ezahlukahlukene ziqala ukubhalisa ukwehla okuqinile kwemakethe yamasheya. Abatshalizimali, beqhutshwa ukwesaba ukuziphendukela kwemvelo okungenzeka ukuthi iWuhan Coronavirus ingagcina iba nakho, bachitha ngokushesha amasheya. Phakathi kwemikhakha ethinteke kakhulu siyathola abanikazi bamahhotela, amahhotela kanokusho, izindiza, nezinto ezithile zokusetshenziswa. Uma kungenjalo, konke ukuhlupheka ngokujwayelekile kuyancipha, okubaluleke kakhulu esingakuthola phakathi kwalabo okukhulunywe ngabo ngaphambili.
Ukwehla komnotho osekuqalile ukuqashelwa, kudluliselwa kule mikhakha. IMeliá, namahhotela ayo ama-5 asebenza eChina, iveze ukuthi indawo abahlala kuyo iphansi, kanti amasheya ayo abhalise ukwehla ngo-5% izolo. Ngokolunye uhlangothi, izindiza ziyaqhubeka namuhla ngokuncipha, ngokulinganisela okuthe xaxa uma kuqhathaniswa nosuku abamnyama abahlupheke ngalo izolo. Izinkampani ezinjenge-IAG ziyavuma ukuthi zenze imali yokugibela izindiza zayo ze-Iberia eziya eShanghai ziguquguquke.
Yini ongayilindela kumthelela weCoronavirus ezimakethe?
Ochwepheshe abehlukene nabahlaziyi bezezimali bebefuna ukukugcizelela lokho umthelela emnothweni usalindelekile. Hhayi ngenxa yalesi sizathu, kunezimpahla ezahlukahlukene ngokwemvelo yazo ezingasebenza kangcono, njengezikagesi noma ezekhemisi. Futhi izimpahla eziyiziphephelo, njengeGolide neSiliva, zenza ukwanda okuthile ngokubuka lelo dolobha elithatha inzuzo futhi lifune isiphephelo. Futhi ngukuthi akumelwe sikukhohlwe lokho kukhona ukuthambekela okuhle okujwayelekile okuphezulu ezinyangeni ezedlule, lapho izimakethe zazibonakala zikhuphuka khona ngaphandle kokwesaba noma yimiphi imiphumela etholakalayo ezuzwayo ezinkampanini. Izimakethe ezisezingeni eliphakeme ngokomlando endabeni ye-USA noma ephakeme yonyaka esimweni saseYurophu.
Amazinga amanani afinyelele kuwo, ngokuphindaphindwayo okufunayo, aphezulu ngokwanele ukuze noma ikuphi ukuthinteka kuthinte izimakethe ngendlela enengqondo.
Kuzofanele silinde ukubona ukuvela kanye nendlela isifo esibhekene nayo. Ukuqala ukuthatha izikhundla kulokhu kungaba ngokuzithoba, bese kuphuthuma. Ukuhamba phambili kulezi zimo kudinga ukulindela okukhulu namandla okuphendula. Ngokunjalo, ochwepheshe nabahlaziyi abehlukene bakhumbule nokuthi esikhathini esedlule lapho kwavela amanye amagciwane, afana ne-SARS, uma elawulwa, kwakutholakala okuhle emakethe yamasheya. Okwamanje, ngokubuyisela, abanye babo bakhumbula nokuthi amasheya awe kanjani ezinyangeni ezimbalwa ezizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izaziso » Ukwesaba iWuhan Coronavirus kudlulela ezimakethe zezezimali
Ngabe iNetflix ibaluleke kakhulu njengoba abahlaziyi besitshela?
Eminye imibono yokutshala imali ngo-2020